Gel for izinwele owesilisa. Ungakhetha kanjani nokuthi ungasebenzisa kanjani izitayela?
Muva nje, abakhiqizi bemikhiqizo yokwenza izinwele bayakhipha yonke imikhiqizo emisha. Ngaphambilini, isitayela esinjalo esetshenziswa ikakhulukazi abameleli besifazane, kodwa manje kukhona i-gel ekhethekile yezinwele zamadoda. Uma ngabe usuvele usebenzise imikhiqizo ehlukahlukene yezinwele zezinwele, mhlawumbe uyazi ukuthi ungabakhetha kanjani. Uma kwenzeka ukuthi uqale ukuthenga nokusebenzisa izitayela, okokuqala kufanele ufike ngendlela efanele.
Izinwele zezinwele zamadoda
Okokuqala, kufanele kuthiwe ukuthi imikhiqizo enjalo yokudoba inesimo esiqinile kakhulu. Umkhiqizi ucabangela ukuthi izinwele zobulili obunamandla zigcwele kakhulu futhi zinzima.
Yiqiniso, i-gel izinwele zamadoda ingasetshenziswa owesifazane. Kodwa-ke, kuyadingeka ukuba ulungele ukuthi izinwele ezincane nezibuthakathaka zingathola umphumela wocingo. Kulesi simo, izinwele zizobonakala zihlambalaza.
Indlela yokukhetha izinwele ezingcono kunazo zonke zamadoda?
Uma uya esitolo bese uthola emashalofini imikhiqizo eningi yokubhala efana nesakhiwo se-gel, cishe uyazibuza ukuthi iyiphi umkhiqizo ongayikhetha.
Kufanelekile ukusho ukuthi imikhiqizo ethandwa kakhulu yomkhiqizo womuntu yiNivea, Taft no-Osis. Kodwa-ke, ungakholelwa ngokukhohlisayo ekukhangiseni bese ukhetha isitayela esidume kakhulu. Ngaphambi kokuthenga umkhiqizo, kufanele ukhethe ngokulungile.
Okokuqala, hlola ukwakheka komkhiqizo. Umkhiqizi uvame ukukubonisa ngemuva komkhiqizo ngesitayela encane. Kuyoba kuhle uma izinwele ze-gel zamadoda ezikhundleni zokuqala zalo zizoba namanzi, izakhi kanye namavithamini.
Okulandelayo, funda ukuthi izinwele zenziwa ngani lo mkhiqizo. Kusho izinwele ezinzima futhi ezinomile ngokuvamile ziqukethe amafutha ahlukahlukene athambisa isakhiwo sezinwele. I-styling enjalo ayikwazi ukusetshenziselwa amadoda anezinwele ze-oily, uma kungenjalo ungathola isitayela esibukeka sinamafutha futhi singabonakali.
Futhi, i-gel yokugqoka izinwele zamadoda ingaqukatha utshwala. Lo mkhiqizo uhloselwe ukusetshenziswa ngezinwele zamafutha. Umile kancane isakhiwo, futhi ukudweba kubonakala kubonakala kungcono.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi imikhiqizo yezinkomba ezinemibala ingashiya iziqephu ezigqoke izingubo, ngakho kufanele isetshenziswe ngokucophelela ngangokunokwenzeka. Yenza okuthandayo kwimikhiqizo ebonakalayo.
Qinisekisa ukuthi unake izindleko zomkhiqizo. Izinwele zezinwele zamadoda, ezinenani lawo liphansi kakhulu, angeke lilungise lokho okulindelwe futhi zibe nokulungiswa okubuthakathaka kunalokho.
Kumele kuqashelwe ukuthi imikhiqizo ye "Nivea" ne "Taft" inamanani entengo kusuka kuma-ruble angu-150 kuya kwangu-300. Ukuqina kwezinwele ze-"Osis" kuningi kakhulu. Uhla lwamanani alo luvela kuma-ruble angu-600 kuya kwangu-900. Izindleko ezinjalo zibangelwa ukuthi imikhiqizo yalo mkhiqizi inguchwepheshe. Cishe, ngeke uwuthole emashalofini ezitolo ezivamile, kodwa ungakwazi ukuthenga ithuluzi elinjalo ezitolo ezikhethekile nezitolo.
Uma ungeke ukwazi ukuthola ikhambi lomdwebo womuntu, ungasebenzisa ngokugcwele umdwebo wesifazane. Nokho, kulokhu, khumbula ukuzinikela. Yenza kuqala kulawo mathuluzi anesilinganiso esiphakeme. Ngokuvamile kuboniswa: ukulungiswa okunamandla noma okunamandla kakhulu.
Ungayisebenzisa kanjani ithuluzi?
Ngemva kokuthenga umkhiqizo, funda ngokucophelela imiyalelo yayo. Ngendlela yokuchofoza ngayinye kuboniswa eceleni. Kubalulekile ukucabangela ukuthi kungenzeka yini ukusebenzisa i-gel yezinwele zesilisa ezinwele ezimanzi.
Kukhona umkhiqizo osetshenziselwa izinwele ezomile kuphela. Uma ungalandeli imiyalo futhi usebenzise ithuluzi elinjalo ngezinwele ezimanzi, kukhona ingozi yokulimaza isakhiwo sezinwele ezimboziwe.
Lawo gels angasetshenziswa ezinwele ezimanzi nawo afanelekile izinwele ezomile. Faka isicelo esincane semidwebo ezandleni zakho bese usakaza ngokulinganayo phezu kwezinwele zakho. Emva kwalokhu, faka i-elegant nge-shape edingekayo futhi uvumele ukuthi umise ikhambi.
Uma usebenzisa i-dryer yezinwele kufanelekile ukunikeza okuthandayo kuma-gel ane-ejenti evikela ukushisa ekubunjweni kwawo. Lolu lwazi luboniswa njalo kwiphakheji.
Kufanelekile ukusho ukuthi i-gel yesilisa ngenxa yokulungiswa kwayo eqinile incolisa izinwele. Yingakho uma usebenzisa ithuluzi elinjalo, kubalulekile ukuhlanza izinwele nsuku zonke.
Uma ungafuni ukugeza izinwele zakho nsuku zonke, imali eningi kakhulu isetshenziswe nsuku zonke ingahlinzeka isitoreji sakho esingenandaba nokungabonakali.
Buka izitayela zefashini bese ukhetha imikhiqizo yokwenza izinwele eziphezulu kuphela. Kuphela kuleli cala inhloko yokuzwa izokwenza ujabule ngempilo yakho nokukhanya kwakho.
Kusihlwa izinwele styling nezinwele ezimfishane
Nekama for nesilevu - accessory ye amadoda stylish
"Pompadour" (ukugunda izinwele): Ukuphila okusha imibono ubudala
Indlela discolor izinwele ekhaya: amanye amathiphu
Amavithamini Good for izinwele - ukuthenga noma ...
Ukuqubuka emzimbeni womuntu omdala - isifo sesikhumba noma uphawu lomunye isifo
Inkukhu ngobisi lukakhukhunathi e Thai Recipes
Indlela ukuqeda amabala yellow ngaphansi emakhwapheni. izindlela elula nephumelelayo
Etshekile imisipha besisu nokwakheka kwawo
Igumbi le-eustoma: likhula futhi linakekele ekhaya
PVA glue: ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nezici
West laseSiberia Laika
Ukukhishwa kwe-Currant ekwindla. I-currant isetshenziswe ekwindla ezivela ezinambuzane
Indlela ukupheka isobho kusukela carp
Iwindi sigqoka. Iwindi sigqoka Pharmacy kanye esitolo